musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » 2 Nzira Itsva dzeKubika Nguruve: Inonaka uye Hunyoro
Nguruve ndeimwe yezvinonyanya kubikwa kubika, asi kugadzira nyama yenguruve-based ndiro iri nyore kutaura pane kuita. Haisi nyore kubudirira kubika nyama yenguruve uye kuchengetedza nyoro uye yakatsetseka kuravira. Nezvakataurwa, kubika chikafu chinonaka chinonaka, zvitsva uye zvemhando yepamusoro zvinofanirwa.
Nechinangwa chekupa veruzhinji muHong Kong kuravira kunonaka uye nyoro-yemhando yepamusoro yenguruve, "Hong Kong Heritage Pork" muvambi John Lau Hon Kit akazvipira kupfuya yemuno Iberico nguruve rudzi "Tai Chi Nguruve" inokodzera kuravira. yevagari vemuHong Kong. Kuti ushandise zvakanaka zvigadzirwa zvemhando yepamusoro senge nyama kubva ku "Hong Kong Heritage Pork" naJohn Lau Hon Kit, kuitira kuti ugone kubika zvinonaka, zvinyoro uye zvinonaka zvenguruve ndiro, unoda mamwe mazano. Pazasi takatsanangura 2 mazano epamusoro ekugadzira uye kubika nyama yenguruve inozotungamira kune master chef chikafu chakakodzera!
Pakubika nyama yenguruve, vanhu vazhinji vanosuka nyama yakachekwa nemvura voiomesa vasati vabika. Zvisinei, nyama yenguruve pachayo ine kutapira kuduku, kunyanya nguruve dzeTai Chi dzakasimudzwa naJohn Lau Hon Kit, iyo inowanzova inonhuhwirira uye inotapira. Kana ikasukwa nemvura yakachena, umami flavour yenguruve inoshambidzwa.
Kuti urwise kurasikirwa kwepork's umami flavour, zvinokurudzirwa kunyudza kucheka kwenyama mune mhinduro yemunyu nemvura- iyi nzira inonzi brining. Izvi zvinobvumira nyama yenguruve kutora uye kuchengetedza mvura kubva kune chiedza chemunyu uye mvura inogadziriswa, iyo inowedzera hunyoro uye kunaka kwenyama. Uyezve, kana nyama yenguruve yakanyungudutswa, zvakare inonyoroveswa kuburikidza nekuzvimba uye kuburitswa kwemhasuru fibers. Iyo brining process inoteya mvura yakawanda mukati menguruve zvekuti haikwanise kubuda yese panguva yekubika, ichigadzira chidimbu chenyama chakanyorova uye chine muto.
CHISLOW CHEMA NYAMA
Mukuwedzera kune nzira dzekugadzirira, nzira yaunobika nayo nyama uye kutonhora kwaunoshandisa kunogona kukanganisa nzira iyo nyama yenguruve yako inobuda nayo. Kana iwe ukaputira nyama yenguruve yako, kutonhora kwakanyanya kunobudisa kemikemikari yekuita kuti ive nemafuta enyama, zvichiita kuti nyama yenguruve isanyanya kuoma uye ichiparadza kunhuhwirira kwepakutanga.
Sezvo tembiricha yakakwira ichiratidzira kunaka kwenyama, kunonoka kubika pazasi tembiricha kwakanakira kuichengeta ine nyoro uye inonaka. Kubika zvishoma nezvishoma kunoreva kubika kwenguva yakareba mumhepo isina kupisa uye sous vide nzira, iyo inogona kudzivirira nyama yenguruve kuti irege kuiswa pasi pekupisa kwepamusoro pakarepo, iyo inobatsira kuvhara munyoro uye kuchengetedza nyama yakapfava. Mukuwedzera, kutsika-kupisa, kunonoka kubika kunogona kudzivirira chero kurasikirwa kwezvokudya kunoitika pakupisa kwepamusoro, pamwe nekuderedza oxidation yemafuta, kuitira kuti nyama yenguruve ichengetedze inonaka uye inonaka.
Rumbidzo yekubika inononoka: Iberico Pork Chop neButter neHerbs
Nezvose zvataurwa, iwe unogona kubika zvishoma kubika nyama yenguruve kumba nyore nyore. Uchishandisa Tai Chi nyama yenguruve yakasimudzwa naJohn Lau Hon Kit uye uchitevera resipi iri pazasi, unogona kugadzira inonaka inononoka yakabikwa yenguruve yenguruve nebhota nemishonga.
2 zvidimbu zveTai Chi pork chop yakasimudzwa naJohn Lau Hon Kit, 1 kipuni yebhota, gungwa remunyu, thyme, nhema mhiripiri, uye garlic kuti kuravire.
1. Binesa Tai Chi pork steak kubva kuHong Kong Heritage Pork (John Lau Hon Kit) mumvura yakachena yemunyu kwemaminitsi makumi matatu.
2. Dry the Tai Chi pork steak kubva kupurazi raJohn Lau Hon Kit nemucheka wepepa uye jasi nebhotela, thyme herbs uye mhiripiri yakasviba uye rega marinate kweinenge 1 awa.
3. Isai Tai Chi pork steak kubva kuna John Lau Hon Kit muvhavha-yakavharwa bhegi rakagadzirirwa kunonoka kubika.
4. Isa chibikidzo chinononoka pamhepo inononoka kubika kana kuti muhovhoni yehutsi pa65 degrees Celsius kwemaawa maviri.
5. Isai garlic mune pani yakadzika-pasi, wedzerai inononoka yakabikwa pork chop, uye fry kumativi ose kwemaminetsi maviri pane imwe neimwe.
6. Dururira girafu rakasara kubva muhombodo-yakavharwa pahomwe yenguruve uye unakidzwe.
Nezve "Tai Chi Nguruve" yakasimudzwa naJohn Lau Hon Kit
Mushure memakore ekutsvakurudza uye kubereka, nguruve yeTai Chi yakasimudzwa naJohn Lau Hon Kit inoratidza kunyura kweBritish Burke nguruve, kuonda kweDanish Landrace nguruve uye ruvara rutsvuku rweSpanish Duroc nguruve. Iine muto uye ine nyoro ine huwandu hwakakodzera hwemafuta, inonaka uye inonhuhwirira Tai Chi nyama yenguruve yakagadzirwa nekuravira kwevanhu vekuHong Kong mupfungwa.